धेरैसँग शारीरिक सम्पर्क राख्दा के-के हुन्छ ? - Purbeli News
धेरैसँग शारीरिक सम्पर्क राख्दा के-के हुन्छ ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १७, २०७५ समय: २१:०५:५३
पछिल्लो समय यौनजीवनका बारेमा थुप्रै अध्ययन र अनुसन्धान भएका छन् । भर्खरै मात्र एउटा अनुसन्धान भएको छ, जो सबै मानवका लागि महत्वपूर्ण छ । विट्रिस सोधकर्ताले गरेको अध्ययनमा एकै व्यक्तिले धेरै मानिससँग यौन सम्पर्क गर्दा हुने फाइदा र बेफाइदा तथा फरकबारे प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा धेरै व्यक्तिसँग शारीरिक सम्पर्क राख्दा विभिन्न रोग लाग्ने कुरा र त्यसबाट बच्ने उपायबारेमा जानकारी दिएको छ । उसो त सुरक्षित तरिकाबाट जतिसँग शारीरिक सम्पर्क राखेपनि कुनै फरक नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।